.အမေ့ကို (၇)နှစ်နီးပါးတိုင် မလုပ်ပေးဖြစ်တဲ့ ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲပြီး ရပ်ကွက်ထဲကသားငါးဈေးမှာ ဈေးကူဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ဗီဒီယို. – Askstyle
.အမေ့ကို (၇)နှစ်နီးပါးတိုင် မလုပ်ပေးဖြစ်တဲ့ ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲပြီး ရပ်ကွက်ထဲကသားငါးဈေးမှာ ဈေးကူဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ဗီဒီယို.
သံုးထပ္ကြမ္း အကယ္ဒမီဆုရွင္ေလး ေဖြးေဖြးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ မင္းသမီးေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့အျပင္ သူမရဲ႕အႏုပညာအေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ခ်စ္ၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြ တစ္ေန့တစ္ျခား ပိုပိုျပီး မ်ားလာသူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖြးေဖြးကေတာ့ ထိပ္တန္းမင္းသမီးတစ္ေယာက္ပီပီ နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္းလိုလို အနုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလို လုပ္ကိုင္ခဲ့ရေပမယ့္ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနွစ္ကေတာ့ ကားအက္ဆီဒင့္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား အနားယူခဲ့ရသလို ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနွစ္မွာေတာ့ ကပ္ေရာဂါဆိုးၾကီးေၾကာင့္ တစ္နွစ္လံုးနီးပါးကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးျခင္းေတြ ရပ္နားခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးျခင္းေတြရပ္နားထားေပမယ့္ ခ်စ္ရတဲ့ မိသားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ့ အတူတူရိွဖို့ အခ်ိန္ေတြပိုရလာတဲ့ ေဖြးေဖြးက အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳးရိွရိွျဖတ္သန္းကုန္ဆံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာလည္း ေဖြးေဖြးက ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မင္းသမီးဆိုတာကို ေမ့ထားျပီး ေစ်းသြားတဲ့ ေမေမ့ေနာက္လိုက္ကာ ေစ်းျခင္းေတာင္းဆြဲ ကူေပးခဲ့ျပီး အေမနဲ့ ဒီလိုေစ်းဝယ္မထြက္ရတာ (၇) နွစ္္နီးပါးရိွခဲ့ျပီလုိ့ ေျပာျပလာပါတယ္။
ေဖြးေဖြးကေတာ့ သမီးမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပီပီ အေမနဲ့ ေစ်းသြားဝယ္ျပီး ငယ္ငယ္က အမွတ္တရအခ်ိဳ့ကို ဖန္တီးနိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ရိုးရွင္းလြန္းတဲ့ဘဝကို ပိုမိုမက္ေမာတဲ့ ေဖြးေဖြးကို ပိုလို့ေတာင္ခ်စ္သြားၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source: Phway Phways fb
အမေ့ကို (၇)နှစ်နီးပါးတိုင် မလုပ်ပေးဖြစ်တဲ့ ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲပြီး ရပ်ကွက်ထဲကသားငါးဈေးမှာ ဈေးကူဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ဗီဒီယို
သုံးထပ်ကွမ်း အကယ်ဒမီဆုရှင်လေး ဖွေးဖွေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အအောင်မြင်ဆုံးသော မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် သူမရဲ့အနုပညာအပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ကြောင့် ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုပြီး များလာသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်ပီပီ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်ကတော့ ကားအက်ဆီဒင့်ဒဏ်ရာကြောင့် အချိန်အတော်များများ အနားယူခဲ့ရသလို ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာတော့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် တစ်နှစ်လုံးနီးပါးကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေ ရပ်နားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေရပ်နားထားပေမယ့် ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူရှိဖို့ အချိန်တွေပိုရလာတဲ့ ဖွေးဖွေးက အားလပ်ချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ဖွေးဖွေးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် မင်းသမီးဆိုတာကို မေ့ထားပြီး ဈေးသွားတဲ့ မေမေ့နောက်လိုက်ကာ ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲ ကူပေးခဲ့ပြီး အမေနဲ့ ဒီလိုဈေးဝယ်မထွက်ရတာ (၇) နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီလို့ ပြောပြလာပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ သမီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပီပီ အမေနဲ့ ဈေးသွားဝယ်ပြီး ငယ်ငယ်က အမှတ်တရအချို့ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ဘဝကို ပိုမိုမက်မောတဲ့ ဖွေးဖွေးကို ပိုလို့တောင်ချစ်သွားကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။